Akụkọ - Gini bu ike nke hydraulic
A na-eji ike hydraulic (HPU) eme ihe dị ka ngwaọrụ mmanụ, nke jikọtara ya na ọtụtụ hydraulic cylinders site na usoro pipeline dị n'èzí iji chịkwaa omume nke ọtụtụ ụdị nke valves.
Fuellọ mmanụ ụgbọ ala, mgbapụta mmanụ na ngwaọrụ ike na-etolite sistemụ mmanụ nwere ike mechiri emechi. Enwere ike iji ụlọ ọrụ PLC kwadebe ya, nke na-achịkwa ọrụ haịịdrọlik niile dị n'ime ya ma na -emepụta akara na na-achịkwa tank mmanụ, mmanụ mgbapụta na ngwaọrụ ọkụ ọkụ iji mepụta sistemụ mmanụ nwere ike mechiri emechi. Enwere ike ịnweta ụlọ ọrụ mmanụ mmanụ na PLC njikwa usoro, nke na-achịkwa ọrụ hydraulic niile dị n'ime ma na-ewepụta akara na njikwa.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, mmanụ mgbapụta na-enye mmanụ na sistemụ ahụ, na-ejigide nrụgide akara nke sistemụ na-akpaghị aka, ma chọpụta ọrụ nke ijide valvụ n'ọnọdụ ọ bụla site na igbochi valvụ njikwa: na steeti ọrụ, onye na-eme hydraulic bụ nke a na-ejikwa valvụ nke solenoid na akara ngosi usoro na-egosipụta valvụl solenoid iji chịkwaa nrụgide mmanụ na mwepụta nke ume nke onye na-akwakọba ihe, wee chịkwaa valve slide mmanụ, na-ebugharị valvụ ahụ site na usoro nnyefe igwe, ma mejuputa ngwa ngwa, mmeghe na mmechi nkịtị na njikwa ule.
Enwere ike idozi cylinder dị elu na valve ma ọ bụ jiri ya mee ihe. A na-eweghachi mmanụ mmanụ ụgbọ mmiri na ọdụ mmanụ haịdrọlik, nke mere na usoro pipeline na-eji otu ọkpọkọ ọkpọkọ mmanụ-otu paịpụ mmanụ iji chịkwaa ọtụtụ valvụ ejikọtara na ya. A na-eji ọdụ ụgbọ mmiri a nke nwere teknụzụ draịva pụrụ iche iji chịkwaa ọrụ nke isi ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na usoro ihe eji arụ ọrụ ụgbọ mmiri.
A na-emezi ikike ike maka ọnọdụ ngwa dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya na gwongworo na-agba ọsọ na gburugburu obi ọjọọ, ma ọ bụ jiri ya rụọ ọrụ ogologo oge na ọnọdụ njikwa, yana oge ndị ọzọ chọrọ ngwaahịa na ngwaahịa dị elu.
Nsonaazụ bụ ikpo okwu dịgasị iche iche, na-eji ọkọlọtọ ọkọlọtọ, nke nwere ike ịnagide ọtụtụ ọnọdụ itinye ngwa ahịa chọrọ. Ahịa nke ndị ahịa nke hydraulic components na-ebelata ruo obere, na-arụ ọrụ nke usoro ndị na-abụghị ọkọlọtọ na-ebelata nke ukwuu. .
Ọ na-ebelata oke ọrụ nke usoro na-abụghị ọkọlọtọ. Dịka ọmụmaatụ, a na-ewu igwe ike HE na ikpo okwu dị iche iche. Igwe ikike ekwe nwere sitere na 80 ruo 132mm (0.3 ~ 4.5kw), na mgbapụta mgbapụta sitere na 0.24 ruo 5.7cc. -A ike unit nwere ike ijikwa 4 haịdrọlik cylinders. Ihe bụ isi nke usoro ahụ bụ ihe nkwụnye ọkụ. Enwere nkọwa abụọ dị iche. Ọ nwere ụdị dị iche iche na ụzọ nrụnye.